साहित्य - AnkaPatra
‘ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे’ डियर एक्स
गङ्गाराम गौतम । आकाशमा रहेका नौ लाख ताराहरूको भीडमा जून भएजस्तै यस पृथ्वीमा रहेका अर्बौं मान्छेहरूको भीडमा तिमी मात्र मेरो लागि खास छ्यौ। यस धर्तीको मनोरम बगैंचामा फुलेकी सुन्दर फूल तिमी, अनि तिमीसँग लगाएको मेरो मिठो प्रेम। प्रेम शब्द आफैमा यति मिठो र मधुर छ भने अझ मैले तिमीसँग लगाएको त्यो प्रेम! शीतलता, शालिनता, शक्ति, […]
२ फाल्गुन २०७७, आईतवार ११:४६
सबभन्दा मूर्ख र अभागी लोग्ने !
दुई बजिसक्यो, तर प्रवोधलाई निद्रा लागेन। छेवैमा पत्नी विणा आनन्दको निद्रामा छिन्। प्रवोधले सोचे, सायद मेरो बा र आमाको सम्बन्ध हाम्रोजस्तै सुमधुर भएको भए आमा पनि बाको छेवैमा यसैगरी आनन्दले सुत्नुहुन्थ्यो होला! प्रवोधले उठेर बत्ती बाल्यो। मुख सुकिरहेको थियो। एक गिलास पानी खायो। प्रवोधको कोठामा एउटा ठूलो काठको दराज छ। दराजमाथि सबैभन्दा तल पुरानो रातो […]
११ माघ २०७७, आईतवार ०९:२६
छोरो मान्छे भएर रून्छन् ?
एक दिन साँझपख केही मान्छेले एउटा स्ट्रेचर हाम्रो घरअगाडि बिसाए। त्यहाँ एक जना महिला सुतेकी थिइन्। उनलाई बेथा लाग्न थालिसकेको थियो। आमाले भन्नुभयो, ‘डेलिभरी यहीँ गराउनुपर्छ।’ उहाँले हतारिँदै डेलिभरी गराउन आवश्यक पर्ने सबै सामान निकाल्नुभयो र मलाई लाइट बाल्न बोलाउनुभयो। उहाँले गरेका सबै काम मैले हातमा लाइट बोकेर हेरेँ। महिला पीडाले चिच्याउँदा मेरो हात हल्लिन्थ्यो। लाइटको […]
कृपयायो फेसबुकको भाईरल भिडियोकोहि कसैले पनिमेरी आमालाई नदेखाउनु !मैले आमालाई फोनमा ढाँटेको छुपल्टनमा धेरै सुख छदिनहु मासु भात हुन्छयो बन्दुकयो बर्दीसान छ आमा! बलेसीको पानीलेपिढिबाट आगनमा झर्दायदि चिप्लिए भने“मेरो बाबा”लाई के भो भन्दैजुठै हात लिएर हत्तपत्त आउनुहुन्थ्यो आमाकतै ठेस लागेर लडे भनेम भन्दा पहिला आफू आँसु झार्दैछातिमा टास्नुहुन्थ्यो आमाअरुको मेलामा दिएको खाजापोल्टामा राखेरसाझपख आफ्नो पोल्टा […]
२१ भाद्र २०७७, आईतवार १७:५७